Barbaarinta carruurta | Samfunnskunnskap.no
Carruurtu waxey u baahanyihiin waalidka, waalidkana waxa xil weyni ka saaran barbaarinta carruurtooda. Berigii hore waxa carruurta loo arki jiray iney yihiin «dad yaryar oo haddana waaweyn», markaa waxey ahayd iney shaqeeyaan oo wax ku soo kordhiyaan dakhliga reerka. Berigii hore caadi ayey aheyd in dad badan oo reerka ahi ay ku wada nooladaan oo wadaagaan guri keliya, laakiin maanta carruurta badankoodu waxey la noolyihiin reerkooda oo keliya. Carruurta badankoodu waxey tagaan xannaanada carruurta, carruurta oo dhana waxey bilaabaan iskuulka laga bilaabo markey 6 jir noqdaan.
Aragtida barbaarinta carruurtu way isbedeshay. Maanta carruurnimadu waa waqti ciyaar iyo tababar wax barasho, caruurtana wax shuruud ah laguma xidho sidii berigii hore oo kale. Waalidku waxey jecelyihiin iney waqti badan la qaataan carruurtooda, waxeyna jecelyihiin iney wax badan ka ogaadaan nolosha carruurtooda waqtiga aaney la joogin carruurtooda. Sidaa darteed waxey isku taxalujiyaan iney wada shaqeyn fiican la yeeshaan xannaanada carruurta iyo iskuulka. Sidoo kale waalidka badakiisu waxey muhiim u arkaan iney bartaan saaxiibada carruurtooda iyo waalidiintoodaba.
Sababtuna waxa weeye waxey carruurtu wax badan ka bartaan oo waayo- aragnimo ka helaan guriga debediisa oo waxa carruurta noloshooda qeyb weyn ka qaadata bulshada iyo bey’ada ey ku noolyihiin. Ma jiro waalid boqolkiiba boqol ka adkaan kara is bedelka iyo horumarka carruurtooda mana jiraan caruur noqon karta sida waalidkooda oo kale. Hase yeeshee waalidku wuxuu jecelyahey inuu hormood u noqdo carruurtooda iyo iney tusaan carruurtooda sida dhaqanka wanaagsani yahey iyo sidii ey u xalliyi lahaayeen xaaladaha kala duwan ee ka horyimaada.
Waalidiin badan ayaa mararka qaarkood waxey u arkaan in barbaarinta carruurtu adagtahey. Waxey markaa sameeyaan tusaale ahaan iney talo ka raadsadaan dad aad u yaqaan barbaarinta, ama buugaag mawduucan ku saabsan ayey akhriyaan ama internetka ayey macluumaad ka raadsadaan.